Archive du 21-avril-2022
Fitondrana Rajoelina Niainga teny an’arabe, hifarana eny an’arabe…
Mandady ny trambo ho an’ny Fanjakana Rajoelina. Miharihary ny fianteherana amin’ny basy amam-tafondro, fa raha fitiavana sy fankatoavan’ny vahoaka dia tena mihena am-pitoeranna tahaka ny fen’antitra.
Zaridaina lava misy ifanabeazana, hoy ny namana Vanf, omaly nanao ny famakafakany teo amin’ny zorom-pejy “Teny gasy” tato amin’ny gazetintsika momba ny nanjo ny “zaridainan’Ambohijatovo”.
Manao antsoavo ny ben’ny tanàna “Tokony mba hanana Hotel de ville i Ambositra”
Azo lazaina ho tratra ny 60%n’ny vina ao amin’ny kaominin’andrenivohitr’Ambositra, hoy ny ben’ny tanàna ao an-toerana, Fomendraza Haingo Elizeth, na teo aza ny krizy ara-pahasalamana nandalo.
Miara-manonja Tena misy ny lonilony
Tsy takona hafenina intsony ny lonilony eo amin’ny samy “Miara-manonja” izay fandaharana politika ao amin’ny haino aman-jery MBS andaniny, ary ny haino aman-jery AZ ankilany,
Fanimbana fananana iombonana Roalahy tratra nangalatra ireo vy teny amin'ny rocade
Amin'ny 08 ora sy sasany alina no nifanena tamin'ny Polisy teny Ambolokandrina izy roalahy mpangalatra ireo niaraka tamin'ny vy lava miisa 02.
Raharaha OMDA Andrasana izay mety ho tohiny
Mba tsy hahadiso ny ady hevitra atao dia nitondra fanazavana momba ny fanesoran’ny filankevitry ny minisitra ny Talen’ny OMDA sy ny tena asa sahanin’ny OMDA tao amin’ny fahitalavi-pirenena
Fisolokiana vovo-bolamena Mpivady avy any Fianarantsoa, tratra teny Anosizato
Tovolahy sy vehivavy iray no voasambotry ny Polisy avy ao amin’ny SUT Tsaralalana tamin’ny 18 aprily lasa teo teny
Anjanahary Nitsoraka tany anaty hantsana ilay fiara
Fiara Renault express iray miloko mena no latsaka tany anaty hantsana teo Anjanahary omaly atoandro tokony ho tamin’ny 12 ora tany ho any.
Mitalaho amin’ny Filoha renin’i Berija “Mba vahao io fanaparam-pahefana natao an-janako io”
Nahavita ny antsasaky ny sazy izay famonoana tanteraka ny hoavin-janako ny zanako, Berija Ravelomanantsoa, hoy omaly ny reniny, Elia Razafindrazafy,
Tolo-tanana ho an-dRambelo Hitohy hatramin’ny zoma ho avy izao
Mbola ao anatin’ny tsy fahasalamana tanteraka ny namana mpanao gazety Ony Rambelo. Raha araka ny fantatra dia mahatsiaro tena izy indraindray nefa tsy mahatsiaro tena tampoka ihany koa indraindray.
Niala teto Madagasikara ny Filoha toa nijaikojaiko, nandeha mangingina niazo an’i Etazonia, tsy nisy akony firy ny fialany teto.